Iran: fomba vaovao mba handrenesana tsara sy mafy ny feo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2019 3:50 GMT
Andeha hojerena ny fomba fampiasan'ny olona ao Iran ny media sosialy mba handrenesana ny feon'izy ireo rehefa iharan'ny teritery sy ny sivan'ny governemanta ny fampahalalam-baovao. Taorian'ny lazaina fa fifidianana tany Iran, voasivana ny ankamaroan'ny aterineto ary tsy nisy ny fampitam-baovao hafa, tahaka ny radio na televiziona, izay ahafahan'ny olona mampihatra ny fahalalahan'izy ireo miteny. Ankoatra izay, dia voaràra avokoa ny gazety mpanohitra rehetra
Na izany aza, nampiasa ny findainy sy ny ordinaterany ny vahoaka Iraniana mba hanapariahana vaovaon'ny hetsika maitso ary mahagaga satria nahavita nifandray tamin'ny tontolo ivelany izy ireo.
Ankehitriny, dia efa nahita fomba hafa handrenesana ny feony izy ireo. Miangona any amin'ny toerana misy ny fampahalalam-baovaon'ny governemanta, toy ny kianja baolina kitra izy ireo.
Ohatra, andro vitsy lasa izay, nisy lalao baolina kitra tao Iran ary nivory tao amin'ny kianja ny olona ary nanomboka nanohitra ny governemanta sy nihiaka teny filamatra manohitra ny didy jadona ary nanjary tantara izany raha nosivanin'ny governemanta ilay antsoantso rehefa nampitaina tamin'ny fahitalavitra Iraniana.
Nitangorona tamin'ny lalao hafa teo amin'ireo mpilalao baolina malaza roa tao Teheran ihany koa izy ireo ary tamin'ity indray mitoraka ity dia afaka mandre ny feony ianao rehefa mihiaka teny filamatra izy ireo. Hoy izy ireo: “Tsy tianay ny lalao baolina kitra ara-politika.” Satria vao haingana, nandany vola be tamin'ny baolina kitra ny Sampana Mpiambina Revolisioinera Islamika mba hanaovana varo-maizina ary hahazoana tombony amin'izany.
Amin'ny tranga iray hafa, miantsoantso mandritra ny fampisehoana izay nalefa mivantana tamin'ny fahitalavi-panjakana ny olona ary miresaka momba ny hetsika maitso ao Iran.
Eto ianao dia afaka mahita ny fomba fampiasan'ny olona ny media sosialy:
Mitady ny vaton-tsafidiny ireo vahoaka ao amin'ny kianja
Manohitra ny fanatanjahantena politika ny vahoaka.
Vehivavy Iraniana niarahaba mpilaza vaovao amin'ny televiona ofisialy izay nanao T-shirt miloko maintso sy nanatevin-daharana ny hetsika maitso tao Iran.